Daawo Muuqalka”Madaxweyne Siilaanyo Oo Hambalyo U Diraay Shucuubta Islaamka Gaar Ahaan Ummadda Reer Somaliland Munaasbadda Ciidal Fidriga Awgeed | Berberatoday.com
Daawo Muuqalka”Madaxweyne Siilaanyo Oo Hambalyo U Diraay Shucuubta Islaamka Gaar Ahaan Ummadda Reer Somaliland Munaasbadda Ciidal Fidriga Awgeed
Hargeysa(Berberatoday.com)-Madaxweynaha Somaliland axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo dhambalyo iyo bogadiin u diray shucuubta islaamka gaar ahaan si weyn u salaamay ummadda reer Somaliland.
• Waxa inala gudboon, in aynu dhinac uga soo wada jeesanno ilaalinta nabadgelyada iyo difaaca qarannimadeena.
• Waxa inala gudboon, in aynu ilaalinno wada-jirka iyo isku-duubnida dhexdeena.
• Waxa inala gudboon, in aynu is-gargaarno, isla markaana caawinno kuweena taagta daran ama tabaalaysan.
• Waxa inala gudboon, in aynu isu caqli-celino, wanaaga is-farno, xumahana iska reebno.
• Waxa inala gudboon, in aynu ka wada qayb-qaadano horumarka iyo dib-u-dhiska dalka, taas oo xukuumadda aan gadh-wadeenka ka ahay ku hawlan-tahay, xilli kasta.